Global Voices teny Malagasy » Resabe Taorian’ny Fandresen’ilay Sarimihetsika Timbuktu · Global Voices teny Malagasy » Print
Resabe Taorian'ny Fandresen'ilay Sarimihetsika Timbuktu
Voadika ny 22 Avrily 2015 11:39 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Eoropa Andrefana, Frantsa, Mali, Maoritania, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Sarimihetsika, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Sehatra ao anatin'ilay sarimihetsika Timbuktu – vehivavy mitomany – CC-BY-20
Ny sarimihetsika novokarin'ilay Maoritaniana Abderrahmane Sissako no nandresy tamin'ny Lanonana Césars andiany faha-40 , natao tao amin'ny teatra Châtelet tao Parisy ny 20 sy 21 febroary 2015. Mitontaly fito ny loka azony , dia ny an'ny mozika tsara indrindra, ny feo tsara indrindra, ny sary tsara indrindra, ny fikirakiràna sary tsara indrindra ary ny mpanatontosa mendrika indrindra.
Tao Frantsa, nitehafan'ny mpijery ihany koa ilay sarimihetsika. Izany tokoa, efa nahatratra ho iray tapitrisa sahady ny isan'ny fidirana nijery azy , isan'ny mpanotrona izay tsy mbola nisy sarimihetsika afrikana nahatratra izany tany aloha tany.
Ao amin'ny tanibe Afrikana ihany koa, niteraka adihevitra marobe ilay sarimihetsika. Betsaka ireo mpisera ety anaty aterineto no mifampizara an'izay fientanentanana izay, toa an'i Dogon64, mpamaky ao amin'ny Malijet. Marihan'i Dogon64 tsara fa efa nahita ilay sarimihetsika izy, tsy toy ireo afrikana hafa mpaneho hevitra kanefa tsy mbola nahita ilay izy akory. Mizara ny fihetsehampony ao amin'ny malijet.com izy :
Eny, dera ho an'i Abderrahmane Sissako, tsy arka izay ambaran'ireo marobe manakiana (sic) ato amin'ity sehatra fanehoankevitra ity, fa nahita io sarimihetsika io aho ary tiako!
Eny misy ny indro kely, ekena fa tsy mitantara izay rehetra tena niseho izy, ekena fa nialàny ny anjara andraikitry ny MNLA, kanefa tantara noforonina ihany io ary ny fihatsaram-belatsihin'ny filamatra islamikan'ireo djihadista ireo fotsiny no tian'i Abderrahmane naseho !
Ary na tianareo na tsia, dia nahavita izy ! Ankehitriny, ianareo mpanakiana (sic) mandra-maty, , Kassin, Mossad, Balimamousso sy ny hafa, inona no andrasanareo mba tsy hivondronana sy hamokatra sarimihetsika araka izay metimety aminareo, anehoana ny fibolilàn'ny finoana Silamo araka ny ataon'ireto adalan'Andriamanitra ireto, ny habibiana ataony ao Mali sy any an-kafa, ny ataony amin'ny vehivavy, ny fanelezana zavamahadomelina sy ny sisa! Inona no andrasanareo ????
Ny tahotra ny hibaby ny fatwa ao an-damosinareo angaha, toy ireo mpanao sariitatry ny Charlie-Hebdo ??
Sa aleonareo i Abderrahmane no handray fahasahiana sy ho sorona ?
Nandray izy, io no hany sarimihetsika miresaka io olana io amin'izao fotoana… mandra-piandry ny anareo ?
Dikasary avy amin'ilay sarimihetsika Timbuktu novokarin'i Abderrahmane Sissako
Ny 28 Martsa 2015, Charles Sanches,  ilay mpitolona ho an'ny zon'olombelona, mipetraka any Dakar, dia nanome ihany koa ny fomba fijery miabo avy aminy momba ilay sarimihetsika :
Nijery an'ilay Timbuktu aho omaly. Sarimihetsika mahafinaritra. Mendrika azy ireo Cesar 7 azony. Farafaharatsiny mba tsy maintsy nahazo Oscar 1 io sarimihetsika io. Ifonako ny teniteny foana nataoko nefa tsy mbola nahita azy akory.
Nanoratra “kiana” lavabe aho izay voafafa tsy nahy. Tena amporisihako anareo ny hijery io sarimihetsika io. Tena manana hatsaràna, endrika hentitra sy seho ivelany tsy fahita firy… Izay tena zava-bita goavana tokoa raha lohahevitra ho anà sarimihetsika saropady tahaka izao.
Io fanehoankevitra avy aminy io dia narahan'ireo fanehoankevitra marobe avy amin'ireo namany ao amin'ny Facebook. Nanoratra i Sid-Lamine Salouka  hoe:
FALY!!! Faly manokana mihitsy aho! Nolazain'ireo manakiana azy ho mpiara-dia amin'ny mpitondra Maoritaniana nefa tsy miresaka ilay sarimihtesika akory fa hoe tsy misy dikany sy mirefarefa amin'ny tany ilay sarimihetsika novokarin'i Sissako. Mampiantso an'i Césaire aho (sy ny Taratasiny ho an'i Maurice Thorez) mba hitenenana hoe tsy antoky ny fananana fisainana tsara na sertifikà manohitra ny fiahiana. Charles Sanches , nanome alina tony ho ahy ianao.
Nivaky i Lamine Fall  fa misy nankafiziny ny sasany amin'ny endrik'ilay sarimihetsika, saingy mbola kianiny ny sasany:
Ekeko ny resaka endrika ivelany sy ny fomba fiditra, ary indrindra fa ny fomba nisafidianana ilay ankizivavy kely. Na izany aza anefa, kianina kely ihany ny fifanindrian'ny sehatra sasantsasany.
Mia Toure,  namany iray monina ao Dakar no nanoratra hoe :
In-droa aho no nilahatra androany mba hijery azy io tao amin'ny CCAF. Fa isaky ny mandeha dia feno hatrany ny efitrano.
Miezaka manazava io fahombiazana io amin'ny alàlan'ny dindon'ny politikan'ny governemanta frantsay amin'ny resaka ady atao amin'ireo mpivavaka mpanao an-tendrony ny sasany amin'ireo mpamadibadika sarimihetsika. Toy ny nataon'i Kassin, ao amin'ny malijet.com, izay manentana ireo mpiray firenena aminy  fa :
Fampielezankevitra iarahan'ny Maoritaniana sy Frantsay io sarimihetsika io ho entina milaza fa ny “touareg” no mizaka ny mavesatra kanefa ireny “touareg” -n'ny MNLA ireny indrindra, tohanan'i MAoritania sy Frantsa no tena fototry ny tsy filaminana any avaratr'i Mali. Nanaovana fampiharana faobe tao Gao sy Tombouctou ny lalàna Charia, tamin'ireo vahoaka izay mainty hoditra no betsaka fa tsy tao Kidal izay ireo ny ankamaroan'ireo touareg mpihoko no monina ao.
Nefa ity sarimhetsika ity dia minia mangina ihany koa amin'ny fangirifirian'ireo Bellah izay mizaka ny fanandevozana ataon'ireo touareg tohanan'i Maoritania. Tsy vao izao io sarimihetsika io no novokarina ary tsy nahazo na inona na inona tamin'ny Cannes 2014, kao inona no anton'ity fanandratana tampotampka teo ity? Tena mitandrema fatratra amin'ny fampielezankevitra ary katsaho mandrakariva ny hahafantatra ny nahoana amin'ny inona. Veloma.
Ao amin'io tranonkala io ihany, KIBILLY SOUSSOKHO no mampivoitra ireo endrika politikan'ilay sarimihetsika  Timbuktu:
Miala tsiny aho, tsy hoe mametraka fisalasalàna amin'ny tena lanjan'ilay sarimihetsika novokariny, fa izaho mihevitra io loka io, indrindra fa arahan'ireto sarivongana kely marobe noraofiny ( lokan'ny fahaizana milalao, mozika tsara indrindra sns ..), noho izany io loka io dia tena mamofompofona politika. Ary avy eo rehefa namokatra ny sarimihetsika Bamako ity ranamana ity, niaraka tamin'i Aminata Dramane Traoré , dia notenenina fa Maliana izy sns … ary ary eo lasa tampoka hoe Maoritaniana lery. Dia avy eo miaraka amin'ny fanaovana totoafo hamadihana an'i Maoritania ho firenena islamika, ho voatery hanamafy ny fiarovana azy amin'ny fametrahana mpiambina manokana ry zareo atsy ho atsy, raha izay no zava-misy, efa misy FATWA sahady momba azy. Fa izaho manokana aloha tsy gaga amin'io César io, lanja mavesatra omena amin'ny sarimihetsika; ary satria i Maoritania no toby famaharan'ny MNLA, dia avelako ho ianareo no haka sary ao an-tsaina ny fahazavan'ny fifandraisana azo tsapain-tànana eo amin'i Frantsa sy ny MNLA.
Ao amin'ny tranonkala africultures.com, maneho hevitra i MlleMemr, mpamaky, ao anatin'ilay lahatsoratra mitondra lohateny hoe STOP AU LOBBY DE TIMBUKTU (sakano ny mpanoso-kevitr'i Timbuktu) :
Alohan'ny hamakianao ny lahatsoratro, tsidiho aloha ity rohy ity.
Sarimihetsika iray natao ho an'ireo fotsy tsara avy ao Frantsa very ao anatin'ny anganonganony momba ny olona manga. Sangy ratsy manome vahana ny zava-tsy mendrika ny Timbuktu. Tehaka ho an'ireo “lasa olom-banona”. Baribariana ireo ary mamitaka io sarimihetsika io. Tehaka ho an'ireo frantsay mpanao gazety nanohana ny tantaran'io sarimihetsika tsy misy tsirony io. Araho io rohy io ary misaotra ry Ing. Barlet (tompon'ilay lahatsoratra), tamin'ny nakanao aingam-panahy taminy talohan'ny nampatoritorianao anay niaraka tamin'ireo fanakianana tsy misy fotony izay tsy fantatra hoe natao ho an'iza izy ireny.
Betsaka tamin'ny ampahan'ilay sarimihetsika no navoaka tao amin'ny Youtube,  niteraka fanehoankevitra marobe. Saingy mizarazara be ihany ny fomba fijery. Tamin'ny fetiben'ny sarimihetsika afrikana natao tany Ouagadougou, ny FESPACO, niteraka resabe marobe  ny fanolorana io sarimihetsika io, nanomboka tamin'ny fotoana handefasana azy, noho ny risika mety hisian'ny fanafihana mety haterak'izany. Nilaina hatramin'ny firotsahan'ny governemanta tetezamita mihitsy mba haneken'ireo mpikarakara azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/04/22/69510/
 Lanonana Césars andiany faha-40: http://fr.wikipedia.org/wiki/40e_cérémonie_des_César
 Mitontaly fito ny loka azony: http://www.academie-cinema.org/ceremonie/palmares.html
 nahatratra ho iray tapitrisa sahady ny isan'ny fidirana nijery azy: http://www.lexpressguinee.com/fichiers/blog16.php?type=rub29&langue=fr&code=calb6306
 Mizara ny fihetsehampony : http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/123793-sissako-la-france-pays-magnifique-capable-de-se-dresser-contre-l.html
 Charles Sanches,: https://www.facebook.com/charles.louanda?fref=nf
 Sid-Lamine Salouka: https://www.facebook.com/sidlamine.salouka?fref=ufi
 Charles Sanches: https://www.facebook.com/charles.louanda
 Lamine Fall: https://www.facebook.com/falllamine1?fref=ufi
 Mia Toure,: https://www.facebook.com/bator.t.dia?fref=ufi
 manentana ireo mpiray firenena aminy: http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/123793-sissako-la-france-pays-magnifique-capable-de-se-dresser-contre-l.html
 STOP AU LOBBY DE TIMBUKTU (sakano ny mpanoso-kevitr'i Timbuktu) : http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=12233#sthash.dEhYIK23.dpuf
 rohy : https://www.youtube.com/watch?v=UNJQxU7__7A
 navoaka tao amin'ny Youtube,: https://www.youtube.com/watch?v=uHBg7NP4ZKc&list=PLHOTRbEsKG83BfFn5ePozNGiyUU6BolWX
 resabe marobe: http://www.afrik.com/fin-de-la-polemique-timbuktu-maintenu-au-fespaco